Izifo Venereal - ubani lo? Yini uphulukisa Izifo Venereal?
Ezithathelwana ngocansi ukutheleleka, zaziwa kusukela ezikhathini zasendulo. Okwamanje, nokudlanga izifo ezidluliselwa ngocansi kuyanda. Lokhu kungenxa yokuthi kwakukhona iqoqo izindlela yokuvikela, okuyinto ukuvikela ukukhulelwa kodwa ayiwavikeli ezifweni ezithathelwana ngobulili. Leli qembu pathologies kuyingozi ngoba idluliselwa ngokuthintana ngocansi, umuntu uletha ngokuphazamiseka okukhulu has yezinkinga ezinzima. Ezinye izifo yilezi eluhlelweni kanye lingakubulala uma singelashwa, isb ugcunsula. Isiguli wazithola izimpawu nezifo ezithathelana ngokocansi kufanele afune ezikhethekile isifo Venereal. Ukuze iziguli Uchwepheshe ukuqondisa abelaphi zendawo, ukusebenza kwayo nezifo zabesifazane, Urology dermatologists. Ngaphezu kwalokho, esolwa Venereal Izifo kungaba Nephrologist bangabonwa amagciwane athile kanye amaprotheni ku isampula umchamo ngokungabi bikho pheshana urinary zokugula noma ukucabanga mayelana nokwenzeka co-ukutheleleka.
Izifo Venereal - ubani lo?
Umsolwa waziphatha ukuhlonza kanye nokwelashwa esithathelwana ngocansi ngokuthi venereologist. Ngaphezu ngokuphatha zokugula engaphansi, imisebenzi udokotela ibandakanya ukuvikela ngenxa yezinkinga uyahluleka uma elwa nokuphuza, kanye nokususwa wabo. Ama-STI unezimpawu ezifanayo, ngakho uchwepheshe kumelwe nifeze elungile umehluko ukuxilongwa futhi linqume ukwelashwa esifike ngesikhathi futhi izinga. Enye ezibalulekile umgomo venereologist - zokuvimbela nokuvinjelwa esithathelwana ngocansi. Ukuze wenze lokhu, lo dokotela kumele uxwayise mayelana yezinkinga kungenzeka, ukukhuthaza izindlela isithiyo sokuba iziguli abangenayo ocansini njalo. Zonke lezi zinkinga kusingathwa a izifo udokotela Venereal.
Lokho ephatha onguchwepheshe?
Ukuze abone STD, kubalulekile ukuba sinake izimpawu njalo kakhulu. Izimpawu eyinhloko Izifo Venereal kukhona osenyameni okungavamile kusukela ipheshana zangasese, ubuhlungu ngesikhathi ukuchama futhi ngokocansi, okuvela kuyo ukuqubuka phezu umthondo kwabesilisa, labia futhi emomozini - kwabesifazane, ukulunywa futhi luvutha. -STI lembula wezifo zabesifazane, Urologist, Izifo Venereal, wesikhumba. Ezinye zezifo indima esemqoka kungokwalabo webhaktheriya (ugcunsula, isipatsholo), viral (zangasese herpes, i-chlamydia, ureaplasmosis), kanye nezifo fungal (candidiasis). Ngenxa yokuthi izifo eziningi ahambisana ukuqubuka, ihlaba umkhosi umsebenzi okhethekile - wesikhumba, Izifo Venereal. Izifo ezivame kakhulu yilezi: ukutheleleka gonococcal, samabhamuza ezithweni zangasese, candidiasis, chlamydia, ugcunsula.
Ngokuyinhloko udokotela kufanele sinake izikhalazo isiguli kanye ubuhlobo obuphakathi izimpawu zesifo noxhumana nabo ngokobulili lesiguli. Isinyathelo zokuxilonga esilandelayo ukuxilongwa okujuli- isiguli, kuhlanganise hhayi kuphela izifo zabesifazane (Urology) luhlolo kwezitho, kodwa futhi isimo umzimba iyonke. Kufanele kube ukuqokwa kwe ukuhlolwa ejwayelekile: ephelele kakhulu segazi, umchamo. Lapho zitholiwe umchamo noma indle kusesimweni esinjani ka-bacterium nesineke ezidingekayo luhlolo ezincane. Uma udokotela liqinisekile ebukhoneni wengulamakhwa e isiguli, kubalulekile ukuqhuba a Luhlatiyo pathologies Venereal. Ukuze wenze lokhu, kufanele uthumele osenyameni evela zangasese ipheshana zokutshala webhaktheriya, virological (i-PCR). Izifo Venereal - ubani lo? Udokotela sibhekene nezinkinga zokuthola izifo zocansi, anakho umyalo esiphelele izindlela zokuxilonga, kanye yesimanje ekukhombeni-STI Amagciwane ubuchwepheshe. Okwamanje, kunezinhlobo laboratories ekhethekile ifakwe imishini yamuva, okukuvumela ELISA ukuphendula, Rif nezinye. umsebenzi Venereologist - ukwazi inqubo ucwaningo okunjalo futhi bakwazi ukuhumusha imiphumela.
izifo Ukwelashwa Venereal
Uma ezikhonjwe STI, kumelwe oyinikeza ukuphathwa efanele. Izifo Venereal ukuthi uphatha? Udokotela utjho yokwelapha esiyimbangela ukulwa pathogen. Njengoba esithathelwana ngocansi kungadalwa amagciwane athile kanye nesikhunta, imithi yabo ihlukile kusuka komunye nomunye. Ekunqumeni gonococcal noma syphilitic ukutheleleka babelwe yokwelapha ngemithi elwa namagciwane (penicillin akuzange kusize). Candidiasis kufanele luphathwe izidakamizwa antifungal (nystatin). Izifo ezifana samabhamuza ezithweni zangasese, chlamydia, mycoplasmosis, zidinga ukwelashwa namagciwane (acyclovir, interferon). Ngaphezu kwalokho etiotrop ukwelashwa, kubalulekile ukuba amise izidakamizwa eqeda ukuvuvukala. yokwelapha Sendawo ukugeza umthondo nezixazululo isinqandakuvunda, lwetimphawu elangeni endaweni ethintekile. Izifo Venereal - ubani lo? Kuvele udokotela abanolwazi kumele akwazi ukuqoka ukwelashwa eliphezulu, okuyinto usindisa isiguli sangasese lwezifo ezithathelana ngokocansi nje kuphela, kodwa futhi ukuze uvimbele yezinkinga kungenzeka. imikhiqizo Manje esakazwa, obuhlanganisa izingxenye etiotropic futhi eqeda ukuvuvukala, baqondiselwa ekwelapheni pathologies eziningana.
izifo Good Venereal kufanele ubaxwayise isiguli mayelana nezinkinga kungenzeka, ezifana ukwedlulela isifo ibe ezingamahlalakhona ifomu, prostatitis, orchitis, conjunctivitis, endometritis. I inkinga eziyingozi kakhulu kuba inkinga yokungabi nenzalo. Ukutheleleka nge-HIV kuholela ukuqeda ukulahleka izakhiwo mzimba umzimba, eholela ukunamathela sebuningini zifo nokufa.
Nokuvinjelwa kwezifo ezithathelwana ngocansi kuyehla kuya abangaki azibandakanya nabo kwezocansi komkhawulo nokusebenzisa amakhondomu. Kuyinto uvithamini ezibalulekile, ukudla, ukungabi hypothermia kanye nokwelashwa kwezifo ezingalapheki, njengoba iningi ama-STI zenzeka ngokumelene isizinda amasosha omzimba buthaka.
Izifo Venereal - ubani lo? Letinemakhono ubuciko kuyinto eyigugu futhi kudingekile kudokotela mayelana ukusabalala ebanzi izifo ezidluliselwa ngocansi, ingozi yezinkinga, ke sisiza ukwelapha nokuvimbela izifo. Ephambi kwezinduna khona isifo esidluliselwa ngobulili kubalulekile ukubhekana kuya Izifo Venereal bese ulandela izincomo zayo.
Dermoscopy - kuyini? Dermoscopy: Intengo
NguStanisław Mikulski: Biography nemisebenzi
Sea kale - ukudla esikhundleni somuthi
Skylights esikhundleni ukukhanyisa kagesi.
"Lada illalah": Izici kanye nokubuyekeza